Deg Deg: Dhawaaqa madaafiicda oo caawa laga maqlayo gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeDeg Deg: Dhawaaqa madaafiicda oo caawa laga maqlayo gudaha Muqdisho
June 14, 2016 Puntland Mirror Home, Somalia, South-Central 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaafiic waa weyn ayaa caawa dhawaaqooda laga maqlayaa magaala Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Sida aya ilo-wareedyo ku sugan Muqdisho u sheegeen warsidaha Puntland Mirror dhawaaqa madaafiicda ayaa laga maqlayaa meelo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Si rasmiya looma ogaan karo khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas, iyadoo lagu jiro xilli habeenimo ah.
Dhacdooyinkan cusub ee caawa ayaa imaanaya iyadoo maanta Madaxweynaha Soomaaliya uu xilkii ka qaaday madaxii haayada nabadsugida ee NISA, Cabdiraxmaan Tuuryare.
Wixii soo kordha dhaqso ayaan idiin kusoo gudbin doonaa.
June 14, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya oo xilkii ka qaaday taliyihii nabadsugida
Saddex qof oo ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Carmo
Boosaaso-(Puntland Mirror) Saddex qof ayaa ku geeriyootay kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo booyad, sida dad goobjoogayaal ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Shilka ayaa ka dhacay wadada laaamiga meel [...]
Mogadishu-(Puntland Mirror) A senior leader of Al-Shabab armed group has surrendered to the federal government of Somalia. Ibrahim Aden Ibrahim known as Nadara, served as the head of Al-Shabab for education in Bay and Bakool [...]